Neymaar,Meesii fi Ronaaldoon badhaasa Ballon d’Or moo'uuf dorgomuutti jiranii, eennutti moo’uu male?
Sadaasaa 30, 2015
Neymaarii fi Meesii
Ballon Dior, badhaasa nama dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti beekamuu kennamu. Ronaaldoo fi Meesiin tana waliin ganna 8 waluma gula irratti wal dorgoman.Ronaaldoon ganna lamaan dabraniiyyuu taphata kubbaa miilaa tokkeessoo jedhame.Suniin duratti ammoo Meessiitti ganna afuri filame.
​Abbaa moohate Ammajii 11,2016 Siwizerlaadni magaalaa Zuurik keessatti labsuuf deeman.
CECAFA:Dorgommii CACAFA biyyootii Afrikaa Gama Jidduutii fi Gama Bahaa waliin taphatan Finfinnee,Awaasaa fi Baahir Daaritti itti jiranii biyya 12 jalqabee amma jahatti walti hafe.
Itoophiyaa fi Taanzaaniyaan hardha taphatanii 1-1 dhumatee. Itoophuyaan waluamtai galatti qabxii afur argattee marsaa itti aanutti dabartee Taanzaaniyaan keesaa galte.Ugaandaan Malaawwii 2-0 mootee Maalaawiin keessaa galte.Suudan Kibbaatii fi Suudan,Riwaandaa fi Keenyaan Muddee 1, 2015 taphatan.
Nyaataa fi dhugaatiin atileetoti argachu malan maan fa?
Atileetota warra addunyaa dorgomiin moohuuf halkani fi guyyaallee leenjin nafa bubbutuchitu.
Akka Dr.Beenyaa Dhugaasaa Toroontoo Kanaadaa irraa nutti himetti: Nyaataa dhugaatii Pirootin, karbohaaydireti,Ayron (Iron) potaashiyeemi qabu fa. Nyaataa kana, foon,aanan,atara, baaqelaa,misira,boloqqee faatti humna kennaaf.
Danfii namaa hin kuraaha maan jennaan miniraalii akka potaashiyeemii fi Ayroon fa waan nafa keessaa bahuuf.
Waan danfaan bahe sun argachuuf nyaata akka potaashiyeemii fi Ayroonii argachuu malan jedha. Potaashiyeemii muzii fi kuduraa fi fuduraa akka akkaa irraa argatan.